Dental Solutions Fekitori | China Dental Solutions Vagadziri uye Vatengesi
■ Yakagadziriswa dhirowa dhizaini inoenderana neergonomic kugara uye kunyepa mamiriro, izvo zvinokodzera kurapwa kwenguva refu.
■ Chigaro chechigaro chakagadzirwa nenzira yakatsemuka, uye zororo rerutsoka rinoumbwa nePNI yakaoma inopupuma furo, inova inopfekwa nemishonga uye isiri nyore kukuvara. Sachigaro wepasipasi ndeye 380mm, iri nyore kune varwere kukwira nekudzika.
■ Yepamusoro-giredhi nyoro dehwe pamutsago ne lumbar rutsigiro uye musoro wekuchengetedza dhizaini ine yakasimba yekunzwa kunzwa.
Chair Chigaro chakaita seperekisi kumashure dhizaini inowedzera nzvimbo yegumbo remachiremba uye inovimbisa mukana wepedyo pakati pemachiremba nevarwere.
Iyo yemazino yekumisikidza unit chinhu chemazino chekurapa chishandiso chakanyanya kugadzirirwa kwemazino kudyara kuvhiya. Inogona kusangana nezvinodiwa zvakakosha zvekuvhiya mazino magetsi, kubvisa uye zvichingodaro.
Iyo Nyasha-D XH502 Dental Unit inogadzirwa zvichibva pamusoro wenyaya we "Nakidzwa kurapwa" naSHINVA. Iyo microcomputer otomatiki kutonga uye LCD inesimba-chaiyo-nguva kuratidza inoita kuvhiya kwechiremba kuve nyore uye kungwara. Iyo ergonomic dhizaini inoita kuti murwere azorodze uye inoderedza kusagadzikana uye kurwadziwa mukurapa. Yayo yakanaka yakazara kuita kunobatsira varwere kunakirwa kurapwa.
Iyo Nyasha-D XH501 Dental Unit inovandudzwa zvichibva padingindira re "kurapwa kwakanaka" naSHINVA. Iyo dhizaini inofunga nezve kugona uye nyore kwekushanya kwemurwere uye nekushanda kwechiremba. Iyo yakanakisa kusarudzwa kwezvinhu, ergonomic dhizaini, microcomputer otomatiki kudzora uye chakuvhuvhu kugadzirwa maitiro zvinoita kuti zviitwe mashandiro, mashandiro mashandiro uye akanaka chitarisiko.
Smart otomatiki Washer-disinfector
Smart Series washer-disinfector inowanzo shandiswa kugeza, kuuraya utachiona uye kuomesa kwechiridzwa (kusanganisira mazino emaoko), magirazi uye midziyo yepurasitiki muchipatara CSSD kana nzvimbo yekuvhiya.
Iyo yekuwachisa uye disinfection mhedzisiro inoenderana neE EN ISO 15883 yepasi rose standard.
YAKANAKA Steam Sterilizer-Kirasi B
YAKANAKA Steam Sterilizer: T18 / 24/45/80 Kirasi B sterilizer yetafura Semhando yekumanikidza sterilizer, inotora mweya senzvimbo yayo yekudzivirira iyo iri kukurumidza kuchengetedzeka uye nehupfumi.Ivo anowanzo shandiswa mumazino dhipatimendi, ophthalmological department, oparesheni kamuri uye CSSD kugadzira kuvharisa kwechinhu chakamonyoroka kana chisina kuvharwa chimbo, jira, midziyo , tsika yepakati, isina kuvharwa mvura etc.
CHIKAMU Steam Sterilizer
YAKANAKA Steam Sterilizer: T60 / 80 senge mhando yekumanikidza yakanyanya sterilizer, inotora huni senzvimbo yayo yekudzivirira iyo inokurumidza kuchengetedzeka uye nehupfumi, inductive mashandiro. Iyo inoshanda mbiri-yekupomba sisitimu uye hombe-inokwana magetsi chengetedzo evaporator inokurumidza kupfuura iyo MOST-T yakajairwa akateedzana akateedzana sterilizer yekupomba kumhanya uye chiutsi chizvarwa. Ivo anowanzo shandiswa mune stomatological department, ophthalmological department, oparesheni kamuri uye CSSD kugadzira kubereka kweiyo yakakombama kana isina kuvharwa chiridzwa jira, midziyo, tsika yepakati, isina kuvharwa mvura etc.
Dmax-N Dhijitari Kaseti Sterilizer
Dhijitari Cassette Sterilizer inogadzirisa otomatiki nekukurumidza sterilization michina iyo inoshandisa kumanikidza mweya senge svikiro. Inokodzera kubviswa kwemidziyo yezvokurapa inogona kumira kumanikidza kwemhepo, senge zvipenga zvemazino, ophthalmic chaiyo zviridzwa, mazino akaomarara endoscope uye chiridzwa chekuvhiya, nezvimwe.